Burtown House & Gardens - N'ime Kildare
Burtown House, ụlọ mbido Georgian nke dị nso na Athy, Co. Kildare, nwere ifuru ahịhịa, akwụkwọ nri na ubi ọhịa nwere ogige mara mma na ije ala ubi.
Ubi ndị dị na Burtown nwere ọtụtụ mpaghara gụnyere nnukwu ahịhịa ahịhịa, ogige okwute, ụzọ yew nke pergola kewara, ubi anwụ na -acha anwụ anwụ, ubi mkpụrụ osisi ochie, ogige ogige siri ike karịa, ubi akwụkwọ nri ahịhịa gbara gburugburu. nnukwu ogige osisi ọhịa gbara mmiri gburugburu. Nbanye: Ndị okenye (?? 8), ụmụaka karịrị 5 (?? 5), tiketi ezinụlọ (?? 20).
Ụlọ oriri na ọ Barnụ Greenụ Green Barn dị n'ihu ogige a na -ahụ anya ogige kichin nwere mgbidi, na -eje ozi naanị ihe ọkụkụ nwere ike ime n'oge ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ na -abịa ozugbo site n'ubi ahụ n'ụtụtụ ahụ.
Pantry Jo'n na Green Barn bụ ngosipụta nke agụụ ha maka nri, nka na ihe ndozi ime ụlọ yana ụlọ ahịa ebe a na -ere nri, ebe a na -ese ihe na ụlọ ahịa dị n'ime na -ere ọtụtụ ihe ọma iri, hụ na mmetụta.
Outdoors, Useslọ & Ubi, Na-eje ije & Hiking, Nature & Anụ ọhịa, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, Ndị na-emepụta, Okwesiri
Okwesiri, Obodo Kildare, Ireland.
Oge mmeghe nke ogige: Wenezde ruo Sọnde 9am ruo 5.30pm
Oge mmeghe Green Barn: Wenezde ruo Sọnde